1-Bromo-3,5-diphenylbenzene - China Ningbo NFC CHEMICAL
FOB Price: n'okpuru ukwu na àgwà
Min.Order ibu: 1.0kgs
Tụkwasịnụ Ikike: 100kgs minium
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: L / C, T / T
Previous: 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
Osote: [(3R) -1-methylpyrrolidin-3-yl] methanol
7 - ((2-Bromo-5-chlorophenyl) methoxy) - 3,4-dihydr ...
RM905 # 72 YUEMING ụzọ, YINZHOU, Ningbo, Zhejiang PROVIENCE
Phenibut na-eji na Russia dị ka a na-emepụta ọgwụ ọgwụ ọjọọ na-emeso a dịgasị iche iche nke ọrịa, gụnyere nchegbu, ịda mbà n'obi, asthenia, ehighi ura, aṅụrụma, posttraumatic nsogbu nrụgide, stuttering, na vestibular ọrịa ...
HTA bụ a phenolic compound. Hydroxytyrosol isi esiwak dị na olive plant.The mgbakwunye na nke acetate abawanye hydroxytyrosol ka bioavailability. Hydroxytyrosol bụ otu n'ime ndị kasị dị ike cellular ahụ ike ...
Curcumol bụ a dị ọcha monomer kewapụrụ Rhizoma Curcumaeis na antitumor eme. Ọ bụ mgbochi mkpali na antiproliferative n'ụlọnga. Egbochi LPS na-akpata NO mmepụta site n'igbochi iNOS mRNA okwu.
Isoxepac bụ elu n'etiti nke Olopatadine, Olopatadine bụ antihistamine (nakwa dị ka anticholinergic na poolu cell stabilizer), ere dị ka a ọgwụ anya dobe arụpụtara site Alcon na otu nke atọ na-eme: ...
-Arụ ọrụ na a atọ quality labortary, NF ...